Moments Neshamwari 17
Sei dzimwe nguva ichitaura kuti Jesu aiva mumwe wevadzikinuri vevanhu uye kuti vanhu vekare vainge vanewo vaponesi vavo, pane kuti vaiti ndiye Muponesi wenyika, sezvinoitwa nechiKristudhomu chose?
Chirevo ichi chinokonzerwa nezvakawanda zvinokonzeresa. Vamwe vanotaura chirevo ichi nekuti vakanzwa chichiitwa nevamwe; vamwe, avo vanoziva nhoroondo yevekare, nekuti nhoroondo yevanhu vekare inorekodha chokwadi chekuti vakave nevaponesi vazhinji. Vaponesi vevanhu vakasiyana vanosiyana zvinoenderana nezvinodiwa zvevanhu vavanouya kwavari, uye chinhu chaicho ivo kuti vazoponeswa. Saka mumwe muponesi akaonekwa achinunura vanhu kubva mudenda, kana nzara, kana kubva pakupinda kwemuvengi kana chikara. Mumwe muponesi akaonekwa achisunungura vanhu vaakauya naye kubva mukutsamwa kuti avadzidzise mitauro, hunyanzvi nesainzi zvakafanira budiriro, kana kuvhenekera pfungwa dzavo uye nzwisiso. Chero ani zvake anga akaverenga zvimwe zvekereke dzenyika dzenyika achanyatsoona kuti vaponesi vakaonekwa mazana emakore kana zviuru zvemakore pamberi pezuva iro Jesu anonzi akazvarwa.
Kana Jesu achinzi ndiye muponesi wenyika neKristudhomu yose, kuzivisa kwakadaro kungave chiratidzo chekusaziva uye kuzvitutumadza kwechiKristudhomu chose, asi zvine rombo kuti kune chiKristudhomu izvi hazvina kudaro. Mumakore ekupedzisira kunyanya, iyo nyika yekumadokero yave uye vava kuve nani kuziva nhoroondo uye magwaro evamwe vanhu, uye manzwiro ane hushamwari uye kuyanana kwakanaka kuri kuratidzwa kune kune mamwe madzinza uye kwavo kutenda. Nyika yekumadokero yakadzidza kukoshesa zvitoro zvehungwaru zviri mukati mehupfumi hwekare hwevanhu vekare. Iwo mweya wekare wevanhu vashoma vari kusarudzwa naMwari kana vanozvisarudzira kuti vaponeswe kubva kuhuwandu hwusingaverengeki hwekare hwanyangarika uye munzvimbo yacho kuri kuuya kuzivikanwa kweruramisiro nekodzero dzevose.
Iwe unogona here kutiudza kana pane vanhu vanopemberera kuberekwa kwevadzikinuri vavo pamusoro kana kumativi ose makumi maviri nemashanu zuva raDecember (panguva iyo zuva rinonzi rinopinda chiratidzo cheCapricorn?
Zuva remakumi maviri raDecember yaive nguva yekupembera kukuru muIjipita, uye mutambo wakaitwa mukuremekedza zuva rekuzvarwa kwaHorus. Pakati pemhemberero nemhemberero zvakatsanangurwa mumabhuku matsvene eChina, mutambo wezvimwe zvitendero zvekare unoteverwa kwazvo. Pakati pevhiki yekupedzisira munaDecember, panguva yemwaka wechando, zvitoro nematare zvakavharwa. Masangano ezvitendero anozopembererwa uye anonzi mhemberero dzekutenda kuna Tie Tien. Mithras yePezhiya yainzi murevereri kana muponesi. Vakapemberera zuva rekuzvarwa kwake pamakumi maviri neshanu aZvita mukati me mufaro mukuru. Zvaizivikanwa kuti panguva iyoyo zuva rinomira uye rinobva ratanga kudzoka kuchamhembe mushure mekugara kwake kwenguva refu kumaodzanyemba, uye zvinonzi mazuva makumi mana akaiswa parutivi rwekutenda nekubayira. Varoma vakapemberera makumi maviri neshanu aDecember nemutambo mukuru mukuremekedza Bacchus, sezvazvaive panguva iyoyo apo zuva rakatanga kudzoka kwake kubva mukunyanya kwechando. Munguva dzakazotevera, apo mhemberero zhinji dzePezhiya dzakaunzwa muRome, zuva rimwe chetero rakatarwa semutambo mukuremekedza Mithras, iwo mweya wezuva. VaHindu vane mitambo mitanhatu inotevedzana. Musi wamakumi maviri neshanu waDecember vanhu vanoshongedza dzimba dzavo nematanda uye mapepa akavezwa uye nepese vanopa zvipo kushamwari nehama. Saka zvichazoonekwa kuti panguva ino vanhu vekare vakanamatirwa zvakare sekufara. Kuti yaive panguva yemwaka wechando solstice haigoni kungova tsaona kana tsaona. Zvine musoro kufunga kuti, mukati mezvinoitika zvese zvakangoitika zvekare, kune chokwadi chiri pasi chechokwadi chakadzama.
Zvinotaurwa nevamwe kuti kuberekwa kwaKristu ndiko kuberekwa kwemweya. Kana izvi zvikadaro, nei Krisimasi ichichengetwa mumuviri wenyama nekudya nokunwa, nenzira yepanyama, iyo yakasiyana zvikuru nemafungiro edu ekunamata?
Icho chikonzero cheichi chinodzoka kuvaKristu vekutanga mazana emakore. Mukuedza kwavo kukanda dzidziso yavo nezvitendero zvevahedheni uye nevahedheni, ivo vakaisa mhemberero dzayo mukhalenda ravo. Izvi zvakapindura zvakapetwa: zvakagutsa tsika dzevanhu avo uye zvakaita kuti vafunge kuti nguva yacho inofanirwa kuve mitsvene pakutenda kutsva. Asi, mukutora mabiko nemitambo, mweya waikurudzira awa wakarasika uye chete zviratidzo zvehutsinye zvakanyanya zvakachengetedzwa kubva pakati pevarume vekumusoro, maDruids nemaRoma. Madzishe emusango aipinda mukati uye rezinesi rese raitenderwa; kudzvinyirira uye kudhakwa kwakakunda panguva iyoyo. Nevanhu vepakutanga, chikonzero chemufaro wavo chaikonzerwa nekuziva kwavo Zuva raive rapfuura nzvimbo yakaderera munzira yake iri pachena uye kubva pamakumi maviri neshanu aDecember akatanga rwendo rwake, izvo zvaizokonzeresa kudzoka kwematsutso uye zvaizovaponesa. Kubva kuchitonhora nekuparadzwa kwechando. Vanenge zvese zvatino tarisa panguva yeKisimusi zvine zvazvinotangira kune vekare.
In 'Moments ne Shamwari,' yeVol. 4, peji 189, zvinonzi Kisimusi zvinoreva 'Kuzvarwa kwezuva risingaoneki remwenje, iye Kristu Musimboti,' uyo, apo unoenderera mberi, 'Unofanira kuberekwa mukati memunhu.' Kana izvi zvirizvo, zvinotevera here kuti kuberekwa chaiko kwaJesu kwaivewo nemakumi maviri neshanu aDecember?
Aiwa, hazvidaro zvinotevera. Muchokwadi zvakanyorwa mu "Moments ne Shamwari" pamusoro zvinorehwa kuti Jesu haasi muviri wenyama. Kuti iwo muviri wakasiyana kubva pane wenyama-kunyangwe iwo wakabarwa kuburikidza uye kubva pane wemuviri. Maitiro ekuzvarwa aya akaitwa uye musiyano uripo uripo pakati paJesu naKristu. Jesu muviri unovimbisa kusafa. Muchokwadi, kusafa hakuwanikwe chero nemunhu kusvikira Jesu kana iye muviri usingafi wakamuberekera. Uyu muviri usingafi, Jesu, kana chero zita raizivikanwa kune vekare, uri muponesi wemunhu uye kwete kusvikira pakuzvarwa kwake paakaponeswa parufu. Mutemo mumwechetewo unobata zvakanaka nhasi sezvawaiita kare. Mumwe munhu anofa haachafi, kana zvisina kudaro angave asingafe. Asi munhu anenge asafa haagone kufa, zvimwe haafi. Munhu saka anofanira kuwana kusafa rufu rusati rwasvika, kana imwezve kuberekwa patsva uye oramba achizvarwa patsva, kusvikira aponeswa kubva kurufu nemuviri wake usingafi Jesu. Asi Kristu haazi muviri, saJesu. Kwatiri uye kwatiri, Kristu musimboti uye kwete munhu kana muviri. Naizvozvo zvakanzi Kristu anofanira kuberekwa mukati. Izvi zvinoreva, kune avo vasingafi, kuti pfungwa dzavo dzinovhenekerwa nekuvapo kweiyo Kristu musimboti uye ivo vanokwanisa kunzwisisa chokwadi chezvinhu.
Kana Jesu kana Kristu asina kurarama uye kudzidzisa sezvaanofanirwa kunge akaita, zviri sei kuti kukanganisa kwakadaro kungadai kwakakunda kwemazana emakore uye kwaifanira kukunda nhasi?
Kukanganisa uye kusaziva zvinokura kusvikira zvatsiviwa neruzivo; nezivo, kusaziva kunonyangarika. Hakuna nzvimbo kune vese. Mukushayikwa kwezivo, kungave kuri kwekunyama kana ruzivo rwemweya, tinofanira kugamuchira izvo sezvavari. Kushuva chokwadi kuti chive chakasiyana hazvingavashandure jot. Iko hakuna chokwadi munhoroondo nezvekuzvarwa kwaJesu kana Kristu. Mazwi Jesu naKristu akavapo mazana emakore munhu akazvarwa patsva asati azvarwa. Isu hatina chinyorwa chekuvapo kwakadaro panguva yaanonzi akazvarwa. Kuti iye anga ararama-uye akange akonzera kukanganisa uye kuzivikanwa sehunhu hwakakosha-aifanirwa kuregeredzwa nevanyori venhoroondo yenguva iyoyo hazvina musoro. Herodhi, mambo, anonzi akaunza vana vacheche vazhinji kuti vaurayiwe kuti ave nechokwadi chekuti "mwana mudiki" haafanire kurarama. Pirato anonzi akatonga Jesu, uye Jesu anonzi akamuka mushure mekurovererwa kwake. Hapana chimwe cheizvi zviitiko zvinoshamisa chakanyorwa nevanyori venhau dzenguva iyoyo. Chinyorwa chega chega chatiri nacho icho chiri mune iyo Evhangeri. Pamberi pezvinhu izvi hatigoni kuti kwakazvarwa kwakazvarwa kuve kwechokwadi. Icho chakanakisa chinogona kuitwa ndechokupa iyo nzvimbo pakati pe ngano uye ngano dzenyika. Kuti isu tinopfuurira mukukanganisa kwedu maererano nekufungidzirwa kwekuzvarwa uye kufa kwaJesu hazvishamise. Iyo inyaya yetsika uye tsika nesu. Mhosva, kana paine chikanganiso, inorara nevanababa vekereke yekutanga avo vakaita chikumbiro nekutanga dzidziso yekuzvarwa uye kufa kwaJesu.
Iwe unoreva kureva kuti nhoroondo yechiKristu haisi chinhu asi fable, kuti hupenyu hwaKristu ndedzechokwadi, uye iyo yepfupi makore 2,000 nyika yave ichidavira munhema?
Nyika haina kutenda muchiKristu kweanenge makore 2,000. Nyika haitendi muchiKristu nhasi. MaKristu pachezvawo haatendi zvakaringana mudzidziso dzaJesu kuti ararame zana ramakore. MaKristu, pamwe nenyika yese, vanoshora dzidziso dzaJesu muhupenyu hwavo nebasa. Hapana dzidziso imwechete yaJesu inoonekwa zvizere nemaKristu. Nezve mutsauko uripo pakati pechokwadi nengano, takataura kuti hapana chokwadi pamusoro pekuzvarwa kwenhoroondo neupenyu hwaJesu. Ngano uye nengano zvinochengetwa nemaKristu mazhinji kuti ave hwaro hwezvinamato zvevamwari, asi kutenda kwechiKristu kuri mukirasi imwechete. Sezvineiwo, chinamato chechiKristu hachina hwaro hwakawanda pane kuva nezvitendero zvikuru zvepanyika. Izvi hazvireve kuti Chikristu ndechenhema, kana kuti zvinamato zvese manyepo. Kune chirevo chekare chekuti mukati meangu ese mythos kune logos. Ngano chinyorwa chine nhoroondo ine chokwadi chakadzama. Izvi ndezvechokwadi nezvechiKristu. Icho chokwadi chekuti vazhinji vakabatsirwa munhoroondo yekutanga uye munguva dzino yedu nekutenda kwehupenyu uye simba rekuponesa raJesu rinofanirwa kuve nerimwe simba rakavanzika; mune simba rayo. Kuonekwa kwemudzidzisi chero upi zvake mukuru kana kudzidzisa zvinoenderana nemutemo wakati, iwo murau wematunhu, kana wemwaka. Nguva yekuzvarwa yakazvarwa yaJesu yaive iri kutenderera kana mwaka wekusimudzira nekusimudzira chokwadi chitsva chakawonekwa. Isu tinotenda kuti panguva iyoyo pakati pevanhu pakanga pane munhu akafa, kuberekwa kwemuviri waJesu, kana achinge asvika, akapa dzidziso yekusafa kuna iye waakawana kugamuchira uye kunzwisisa. Zvino kwakaunganidza vanhu vazhinji vakavakomba, vakanzi vadzidzi vake. Kuti hakuna nhoroondo yeizvi kunokonzerwa nekusazivikanwa kwake kuvanhu vaive vasina ruzivo rwechakavanzika chine chekuita neupenyu hwokusafa. Achisara nekudzidzisa vadzidzi vake kwechinguva, akabva aenda, uye dzidziso dzake dzakasimudzirwa nevadzidzi vake. Chikonzero chekupfuurira mukutenda kwa Kristu nedzidziso dzake ndechekuti pane mukati me munhu kutendiswa kuri pasi pasi mune mukana wekusafa kwake. Ichi chitendero chekare chinowonekwa mukudzidziswa uko kwakatsauswa nechechi kuita kwavo.